ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »7အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သင်ပစ်ခတ်ရနိုင် Freaky အကြောင်းရင်း
လူတိုင်းသူအလုပ်လုပ်နေစဉ် match.com အပေါ်ကြောင့်စည်သွတ်တယ်သောသူတယောက်ကောင်လေး၏ကြားတော်မူပြီ. သင်နဲ့အလုပ်မှာနေတဲ့အခါသင့်ရဲ့ website မှာချိန်းတွေ့ဖြစ်ဘယ်တော့မှမပေးသင့်. ဒါဟာသင်သည်ထိုဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဂရုမစိုက်ပါဘူးတဲ့သဘောမျိုးကိုပေးနိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာမှာချင်ကြပါဘူးကိုသင်တို့အားသန့်ရှင်းသောသင့်ရဲ့နှာခေါင်းကိုစောင့်ရှောက်ကူညီခြင်းနှင့်သင်အွန်လိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့ကြသည်နှင့်သင်နေဆဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကောင်းသောအမှုကိုပြုနိုင်လိမ့်လိုတဲ့အခါဒုက္ခထဲကထွက်နေမည်တချို့ကိုအကြံပြုချက်များမှာ.
စလုပ်ဖို့, သင်အမြဲအချိန်ပေါ်မှာရှိလိုပေမည်. သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့ပစ်ခတ်ရနိုင်အကြောင်းရင်းတစ်ခုပင်သင့် email inbox စစ်ဆေးနေအလုပ်မှာအင်တာနက်ပေါ်မှာဖြစ်ခြင်းဘဲထိုအတူပြုစရာမလိုဘူး. သင်သည်အမှုရောက်သောထွက်နေဖို့လိုပါလျှင်, သင့်ရဲ့နေ့လယ်စာစားသို့မဟုတ်အခါသင်အိမ်ပြန်ရမှာသင့်ရဲ့စာတွေကိုစစ်ဆေး. အလုပ်အတွက်နှောင်းပိုင်းဖြစ်မထားပါနဲ့.
သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့ပစ်ခတ်ရတဲ့တက်အဆုံးသတ်စေမည်အကြောင်းနောက်ထပ်အရာအလုပ်ခွင်မှာသင့်ရဲ့ website မှာချိန်းတွေ့ inbox ရဲ့စစ်ဆေးနေ. သင်ဟာအလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်, သင့်ရဲ့လူမှုဘဝအပေါ်စစ်ဆေးနေခြင်းကိုမခံ. သင့်စာဝင်ပုံးကိုစစ်ဆေးခြင်းကအရေးကြီးတယ်, သင်ကချိုးသို့မဟုတ်သင်အလုပ်လုပ်စရာမလိုသောအခြားအချိန်ပေါ်ကြသောအခါသင်တို့မူကားထိုသို့ပြုစေလိုပါလိမ့်မယ်. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သင့်ရဲ့သူဌေးကိုသင်အင်တာနက်ကိုအချိန်ဖြုန်းကြသည်ဟုထင်နိုင်, နှင့်သင်ပစ်ခတ်နှင့်အတူအဘယ်သူတစ်စုံတစ်ဦးငှားရမ်းတက်အဆုံးသတ်မည် “လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုအင်တာနက်အပေါ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။”
သင်သည်လည်းအစဉ်အမြဲသင့်အပြုအမူကိုရိပ်မိသည်ဘယ်လိုသတိထားရမည်. သင်ထူးဆန်းအလုပ်ခွင်မှာတစ်ခုခုတက်ကိုဖုံးအုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာသရုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့သူဌေးကိုချက်ချင်းတစ်ခုခုသံသယလိမ့်မယ်, ထိုအခါသင်နှင့်တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာစောင့်ကြည့်. တစ်ခုမှာရိုးရှင်းတဲ့စလစ်-up လုပ်ပြီး Bam, သင်သွားကြောင်းင်.
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ခြင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဘဝရှိခြင်း၏အခြားအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်. သင့်ရဲ့အချိန်ဇယားကို re-စီစဉ်နည်းနည်းအားရှိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့သူဌေးကိုတကယ်အဖေပြီးအောင်တစ်ခုခုလိုအပ်သည်ဆိုပါက, သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမအတွက်အချိန်ပါစေ.
သင်တို့သည်လည်းသင်တို့အထဲ၌ချပြီးဖြစ်ကြောင်းအားထုတ်မှုအာရုံစိုက်သင့်တယ်. သင်ကပူယနေ့အထိဝတ်ဆင်တံ့သောအရာကိုစဉ်းစားကြသောအခါသင်တို့ကိုယနေ့ညရှိသည်, သင်သည်သင်၏အလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြသည်မဟုတ်, နှင့်သင်၏အပြည့်အဝအလားအလာအတွက်ချပြီးမ.
လည်း, သင်ကကုမ္ပဏီ badmouth ဘယ်တော့မှမပေးသင့်, ပင်မသင့်အွန်လိုင်းယနေ့အထိ. သင့်ကုမ္ပဏီဤအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့မယ်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အလုပ်ကနေထုတ်ပယ်သင့်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, အဘယ်သူမျှမကလိုလား. သင့်လုပ်ငန်းခွင်အပြုသဘောနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးအီလက်ထရောနစ်မှတ်ချက်များကိုသိမ်းဆည်းထားပါ.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်ရုံယေဘုယျအားဖြင့်ဒုက္ခထဲကထွက်မြောက်နေဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်. လူမျိုး၏မှားယွင်းတဲ့မျိုးဖြင့်ဖော်စပ်သင်ပစ်ခတ်လာဆောင်မှာမှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်. အောက်ပါဤအကြံပြုချက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝ၌သင်အောင်မြင်စေတော်မူမည်.